Tinoona apa vakomana vechiuto vachitandadza vanhu muFirst Street. Ipapa pane shasha yakabata hosho iyo nechekurudyi uko. Shasha inovaraidza iyoyi. Ndinodada nemurume uyu nukudavadika kwake. Ainakidza mhomho yavanhu panguva ye HIFA 2012. Zvodadisa wani. Mufananidzo naTinashe Muchuri. Aive asipo chitaurirwa mbare dzegotsi.